I-OPPO A1K: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-Realme, uphawu lwesibini lwe-OPPO, izolo linike imodeli yayo entsha kuluhlu oluphantsi, i-C2. Ngoku lithuba lophawu oluphambili lokusishiya ne-smartphone yalo entsha kweli candelo linye. Imalunga ne-OPPO A1KOluloluhlu lwegama lesiTshayina. Olunye udidi oluthi ngoku zigcinwe kwikhathalogu yefowuni yakho.
Sele kunyaka ophelileyo besinemodeli ezithile ngaphakathi kolu luhlu lweefowuni. Uphawu lwaseTshayina lwenza olu sapho ikhule ngoku ngokuboniswa kwale OPPO A1K. Imodeli elula, nangona ishiya imvakalelo elungileyo kuluhlu lwayo. Ukongeza kokufika ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Kwinqanaba loyilo siyabona ukuba kujongeka njengeefowuni ezininzi esizibonayo ngoku kwintengiso. Ikwafana neRealme C2 ethiwe thaca ngokusemthethweni izolo. Ke ngoko, sifumana isikrini esinotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi kuyo. Uyilo olunokuthi ngoku lungaphumi kwisitayile.
I-OPPO Reno: I-brand entsha ye-smartphone isemthethweni
1 Ukucaciswa kwe-OPPO A1K
Ukucaciswa kwe-OPPO A1K
Sifumana ifowuni elula ngokweenkcukacha. Kodwa oko kuyahlangabezana noko sinokulindela kwifowuni ngaphakathi kuluhlu lwayo. Ukongeza, le OPPO A1K ime ngokuba nebhetri enkulu, eyenye yeempahla zayo ezinkulu. Nazi iinkcukacha ezipheleleyo zomnxeba:
Isikrini: 6,1 intshi nge-1560 x 720 isisombululo kunye ne-19.5: 9 ratio
InkquboImediaTek Helio P22
Ukugcina ngaphakathiI-32 GB
Ikhamera yangaphambili: 5 MP ngokuvula f / 2.0
Cámara trasera: 8 MP ngokuvula f / 2.2
Ibhetri: I-4000 mAh
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie enombala we-OS 6.0
Conectividad4G, iWi-Fi 802.11 a / c, iBluetooth 4.2, iMicro USB
Ubukhulu: 154,5 x 73,8 x 8,4 mm
U bunzima: Iigram ezili-170
Uyilo lwale OPPO A1K yinto eqhelekileyo, Ukuba sithathela ingqalelo ukuba uninzi lwee-smartphones ezifika ngoku kubhejo lwe-Android kule notch inye ngohlobo lwethontsi lamanzi. Ke ayisiyonto eyahlula ifowuni. Uphawu lwaseTshayina lujoyina izikrini ezingaphezulu kweesentimitha ezi-6 kule fowuni. Kwelinye icala, sinomprosesa weMediaTek, ngokuqinisekileyo onceda ukugcina ixabiso liphantsi. Njengoko sibona kwiimodeli ezininzi ezisezantsi, akukho mkhondo woluvo lweminwe kwifowuni. Kule meko, nathi asinakho ukuvula kobuso, njengoko kunjalo nakwezinye iimodeli ezikolu luhlu. Yintoni ngokungathandabuzekiyo ethintela le fowuni yohlobo lwesiTshayina ngendlela ebonakalayo.
Ibhetri ngokungathandabuzekiyo yenye yamandla efowuni. Kuba esi sixhobo siza nebhetri yomthamo we-4.000 mAh. Ke sinokulindela ukuzimela okuhle kule nkalo kuwe. Into enokwenza ukuba uninzi luphele lukhetha umnxeba. Iikhamera zilula, ziqhelekile kolu luhlu, kodwa zisebenza kakuhle. Ukongeza, kufanele kuqatshelwe ukuba le fowuni sele iza ne-Android Pie njengenkqubo yokusebenza ngokwendalo.
I-OPPO AX5s: Uluhlu olutsha lokungena
Le OPPO A1K sele ihanjisiwe ngokusemthethweni eRashiya. Ifowuni inokwaziswa kwayo kwiimarike ezimbalwa, ngaphandle kweRussia. Kuba siyazi ukuba izokwaziswa e-India nako nje, apho ixabiso layo liqinisekisiweyo ngokusemthethweni. Iya kuthi iphele kwezinye iimarike zaseAsia kwaye inokukhutshwa ngokulinganiselweyo eYurophu. Kodwa kuya kufuneka silinde iindaba malunga noku.
Kuqinisekisiwe ukuba ifowuni Iyathengiswa ngemibala emibini: emnyama nebomvu. Sifumana ingxelo enye yale OPPO A1K ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, eyi-2/32 GB. Ke ngoko, unokukhetha le nguqulo kuphela xa ufuna ukuthenga ifowuni kwintengiso. Ixabiso layo lahlukile.
Ukusukela kwimeko yeRussia Ixabiso lama-ruble ayi-9990 liqinisekisiwe (i-euro ezingama-140 kutshintsho) kwaye e-India i-7.990 rupees (malunga ne-103 euro). Ke ukuba iphehlelela eYurophu, iya kuba ngaphantsi kwe-150 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OPPO A1K: Uluhlu lokungena olutsha lwebhrendi